Para Lawka (3) – Possession | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← MM Blog Academy Award 2009
Book Review: Wars, Guns and Votes →
January 10, 2010 · 11:45 am
Para Lawka (3) – Possession
ပို့စ်ဆက်မရေးခင်နဲ့ ပို့စ်ဆက်ရေးဖို့ အပျိုးအဖြစ် ကော်မန့်နှစ်ခု ဆွဲထုတ်ပြီး အကြောင်းပြန်ချင်ပါတယ်။ ကိုမြင့်မြတ်က ဒီလို အမေးရှိပါတယ်။
အဲဒါကို လတ်တလော မဖြေလိုသေးပါဘူး။ နောက်တော့မှ တဖြည်းဖြည်းရေးမယ် စိတ်ကူးပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မဖတ်မရှု အရမ်းကာရော အပြစ်တင်၊ ပြစ်ပယ်တယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာပေါင်းစုံက ကျမ်းဂန်တွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် ဖတ်ရှုနေဆဲပါ။ နောင်တော့ အသက်ကြီးမှဖြစ်ဖြစ် အေးအေးဆေးဆေး ရေးမယ် စိတ်ကူးပါတယ်။ (ဂျက်ဆီဂျိန်း လုပ်လိုက်တာပေါ့ 🙂 )
နောက်တစ်ခါ Indrew ကတော့ အဲဒီလိုပြောပါတယ်။ ကိုမြင့်မြတ်ကလည်း ပူးတဲ့အကြောင်း ပြောထားပါသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရည်ရွယ်ရင်းရှိတဲ့အတိုင်း ကျနော် ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ “ဝင်ပူးကပ်ခြင်း” အကြောင်း ပြောပါမယ်။
ပူးကပ်တယ်၊ ဝင်ပူးတယ် စသည်ဖြင့် မြန်မာတို့ သိထားတာမှာ နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုက မြန်မာတွေလက်ခံထားတဲ့ ၃၇ မင်း စတဲ့ အစိမ်းသေနတ်များ ပူးဝင်ခြင်းနဲ့ မကျွတ်မလွတ်သည့် သရဲ တစ္ဆေ စသည်တို့ ဝင်ပူးခြင်းဆိုပြီး ဆိုနိုင်ပါမယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ အပေါင်းလက္ခဏာအဖြစ် ရှုမြင်ကြပေမယ့် နောက်တစ်ခုကိုတော့ အဆိုးမြင်ကြတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်အခုပြောမှာက ဒုတိယ တမျိုးပါ။
မပြောခင် ဇာတ်ရည်လည်အောင် ခင်ကျင်းပါရစေ။ နေရာက ပဲခူးရိုးမနားနီးတဲ့ တောရကျောင်းလေးတစ်ခု၊ အဲဒီတောရကျောင်းမှာ တောထွက်ကိုယ်တော်ကြီးတစ်ပါး ဦးဆောင်မှုနဲ့ တောင်မြို့မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းက ရဟန်းပျို ၃ ပါး၊ ဂျပန်လူမျိုး ရဟန်း ၂ ပါး၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဦးပဇင်းတစ်ပါး (ကျွန်ုပ်)၊ ပြီးတော့ အနီးနားရွာကနေ လာရောက်ပြီး ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုနေတဲ့ ကပ္ပိယဒကာကြီးတစ်ယောက်။ ဒကာကြီးက မွေးထားတာ သမီးတွေချည်းပဲ၊ အကြီးမက အိမ်ထောင်ကျလို့ သူ့အိမ်နားမှာပဲ အိမ်ခွဲနေတယ်။ ကျန်တဲ့ အပျိုတွေက ဖအေနဲ့ အတူနေကြပြီး ဆေးလိပ်လိပ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြတော့ မိသားဖသားတစ်စု စားလောက်တာနဲ့ ဒကာကြီးက အပူအပင်မရှိတော့ ကျောင်းရိပ်ခိုတာပေါ့။ ညအိပ်ညနေတော့ မနေပါဘူး။ တောသားပီပီ ရိုးတယ်။
သမီးကြီးက ကလေး၂ ယောက်အပြင် ကိုယ်ဝန်လ နေစေ့လစေ့နဲ့။ တနေ့မှာ မီးဖွားချိန်ကျလို့ ဗိုက်နာပေမယ့် မီးမဖွားနိုင် ဖြစ်ပါလေရော။ ဖြစ်ရာကနေ သတိလစ်သွားတော့ မြို့ပေါ်ဆေးရုံကြီး တင်လိုက်ရတယ်။ ဒကာကြီးဟာ သမီးဇောနဲ့ ပူပင်သောကတွေများပြီး ကျောင်းကို အပြေးကလေးလာတယ်။
“အရှင်ဘုရားများ၊ ပရိတ်ရေများ ချီးမြှင့်တော်မူပါ” ပေါ့။ ဒီနေရာမှာ ဦးဆောင် တောထွက်ကိုယ်တော်ကြီးအကြောင်း ကြားညှပ်ရဦးမယ်။ ဆရာဝန်ကြီးဘဝကနေ အငြိမ်းစားယူပြီး ရဟန်းပြုလာတာ။ ဝိနည်းအလွန်ရိုသေတယ်။ အင်မတန် ဂွတိုက်တယ်။ ပြောရဆိုရ လက်ပေါက်ကပ်တယ်။ မအပ်စပ်တာတွေ လာခိုင်းရင် အော်ထုတ်တာချည်းပဲ။ ဒါပေသိ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကပ္ပယကြီးလည်း ဖြစ်ပြန်၊ ဒကာကြီးရဲ့ မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်သောကကိုလည်း ဂရုဏာသက်ဟန်တူရဲ့။
“ကိုင်း … ရွတ်ပေးတာပေါ့ ဒကာကြီး” ဆိုပြီး ကိုယ်တော်တွေ အာပတ်ဖြေ ပြီးတော့ ခွက်တစ်ခုမှာ ရေထည့် ဝိုင်းထိုင်ပြီး ပရိတ်ရွတ်တာပေါ့။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂုလိမာလသုတ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်တော်ကြီးက သစ္စာလည်း ဆိုပေးလိုက်သေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ မီးဖွားလွယ်အောင် အဲဒီသုတ္တန်ကို ရွတ်ရတယ်။ ပရိတ်ရေကို မီးဖွားစဉ် ကိုယ်ဝန်သည်ရဲ့ ဆံပင်မှာ သပ်ချပေးရင် မီးဖွားရတာ အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ အယူရှိကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တော်ကြီးက ဆရာဝန်ကြီးဟောင်း မဟုတ်လား၊ ဖြစ်ပုံရာဇဝင်ကိုမေးပြီး ဒီတောင်က ကျော်မကျော်ကို သူသုံးသပ်နိုင်ပုံရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒကာကြီးကို သတ္တတစ်ခု ကံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တရားချလိုက်သေးလို့ပါပဲ။
ပရိတ်ရေလည်း မကယ်နိုင်ပါဘူး။ မီးမဖွားနိုင် မေ့မျောနေရာကနေ အသက်ဆုံးပါလေရော။ ကလေးလည်း အဖတ်မတင်ဘူး။ သားအငယ်ကောင်က အလွန်ငယ်သေးတော့ ဒကာကြီးသမီးက စိတ်မချဘူး။ မီးမဖွားခင်ကပဲ သူ့ယောက်ျားနဲ့ ညီမတွေကို သူမရှိစဉ် ဂရုစိုက်ဖို့ အတန်တန် မှာတယ်ဆိုတယ်။ ဒီတော့ မေ့မျောရာက ကွယ်လွန်တာကြောင့် ဘာမှ အထွေအထူး မှာမထားနိုင်ခဲ့ဘဲ စိတ်စွဲပြီး ဆုံးရတယ် ဆိုနိုင်တယ်။
အသုဘရှုကို ရွာ သုဿန်မှာ လုပ်တယ်။ ကျုပ်တို့ ရဟန်းများက တခန်းပါရသေးတော့ ကြွရောက်ပြီး အသုဘရှုရတာပေါ့။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အတိုင်းပဲ ရွတ်ဖတ်သရဇ္စျယ်နေတုန်း ဗြုန်းဆို မိန်းမတစ်ဦးဟာ အသံနက်ကြီးနဲ့ “အမလေး … ကျမကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်လိုက်ကြပါ၊ သားအငယ်လေးကို ဂရုစိုက်နော် … အမေရေ … ညီမရေ … ကျမကတော့ မကြည့်နိုင်တော့ဘူး” ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ် ပစ်လှဲရင်း အော်ချလိုက်တာ သံပြိုင် ရွတ်ဖတ်နေတဲ့ ကျုပ်တို့ ကိုယ်တော်တွေဟာ တုန်တက်သွားပြီး၊ ပရိသတ်တွေလည်း လန့်ဖြန့်၊ ကျုပ်တို့လည်း ရွတ်ဖတ်နေတာ ရပ်တော့မလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တော်ကြီးတစ်ပါးပဲ အသံမာမာနဲ့ ဆက်ရွတ်လို့ မျှောလိုက်ရပေမယ့် တရားဦးဆောင်ပေးတဲ့ ဂန္ဓာရုံက ကိုယ်တော်ရဲ့အသံဟာ တုန်လာပါတယ်။
ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ပြီး တုန်ရလား မမေးပါနဲ့။ ကြက်သီးတွေပါ ဖြန်းဖြန်းထတယ်။ ဖြစ်ပျက်ပုံကလည်း အစအဆုံးသိထား၊ သင်္ချိုင်းမှာလည်း ဖြစ်ပြန်၊ အလောင်းကလည်း မနီးမဝေးမှာ၊ အသံကြီးကလည်း အော်ဟစ်နေတာ ကြောက်စရာကြီးဗျ။ ကျုပ် အမှန်ပြောရရင် ကြက်သီးတွေထပြီး အဲဒီပူးဝင်နေတဲ့ ဒကာမက ကြေကွဲစရာ အသံကြီးနဲ့ ကလေးတွေအတွက် တဖွဖွမှာနေတာ သနားလွန်းလို့ ရွတ်ဖတ်နေတာ အသံတိမ်ဝင်ရာကနေ စိတ်မခိုင်တော့တာနဲ့ မျက်ရည်ပါ ပိုးပေါက်ကျလာလို့ ယပ်တောင်နဲ့ မျက်နှာကို ကွယ်လိုက်ရပါတယ်။ (အခုရေးနေရင်းတောင် ပြန်ကြားယောင် မြင်ယောင်ဖြစ်ပြီး ကြက်သီးထပါတယ်။) ကျုပ်ရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဗိုလ်တေနဲ့ ဗိုလ်ပဏ် ကိုယ်တော်တွေလည်း ဂရုဏာသက်တာနဲ့ မျက်ရည်ကလေး စမ်းစမ်းပေါ့။ ဗိုလ်သောဘိကလည်း သူ့လက်ကိုင်ပုဝါ အဖြူလေးထုတ်၊ ချွေးသုတ်သလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်လေးသုတ်လို့ပေါ့။ ပရိသတ်ကလည်း ငိုတဲ့သူ ငိုပေါ့။
ရုတ်တရက်တော့ ကြောင်နေကြရာကနေ သတိဝင်လာကြပြီး မိန်းမကြီးတွေက ဟဲ့ … လုပ်ကြပါ ထိန်းကြပါ … ဆိုပြီး ဝိုင်းချုပ်တာ မရဘူး။ “ဟဲ့ မ… သတိထားစမ်း”၊ “ဘာမှ မပူနဲ့” “စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်ထား … တရားကိုနာ” …။ ဝိုင်းပြီး ဖိကြ ချုပ်ကြ ပြောကြ၊ မရပါဘူး၊ သားဇောကပ်နေတော့ ဘုရားသော တရားသောလည်း နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူး။ ကိုယ်တော်တွေလည်း သဘောပေါက်တယ် အမျှဝေပြီး သူသာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါနဲ့ အမျှဝေတဲ့ အထိ မြန်မြန်လေး တွန်းသွားရတယ်။ အမျှဝေခါနီး ခဏငြိမ်သွားပေမယ့် သာဓု မခေါ်တော့ ကြည့်လိုက်တာ အဲဒီဝင်ပူးတဲ့ မိန်းမဟာပျော့ခွေပြီး သတိလစ်နေပြီ။ ဝင်ပူးတာ ထွက်သွားပြီဆိုပါတော့။ နာနှပ်ယူတော့ အဲဒီမိန်းမမှာ မျက်စိတွေလည်းနီရဲ၊ အဝတ်က ဖရိုဖရဲနဲ့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းတွေ ဖြစ်နေရော။
အဲဒီမိန်းမကို ကျုပ်တို့သိပါတယ်။ ဒကာကြီးတို့ ရပ်ကွက်ထဲကပဲ။ အင်မတန် အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ အပျိုကြီး။ ဆေးလိပ်လိပ်တယ်။ အိပ်ထဲက အိမ်ပြင် ထွက်လှတာ မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်ရတာ သေဆုံးသူဟာ ဇောကြီးလွန်းတော့ စိတ်နုတဲ့ အဲဒီမိန်းမကို ဝင်ပူးကပ်ပြီး ကလေးတွေအကြောင်း တဖွဖွမှာရှာတယ် ထင်တယ်။
ရေစက်ချတရားဟောတဲ့ ကိုယ်တော် ဗိုလ်တေက “ကျုပ်ဖြင့် ရင်ကို တုန်သွားတာပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ကိုယ်တော်ပေါက်စတွေအဖို့ ဒီအကြောင်းဟာ ရက်အတော်ကြာ ပြောစရာ ဖြစ်နေခဲ့သေးတယ်။ ဘာမှ မဖြစ်သလို နေနိုင်တာကတော့ ဦးဆောင် ကိုယ်တော်ကြီးပါပဲ။ သူ့ကို ကြောက်တာနဲ့ အဲဒီအကြောင်း သူ့ကို မမေးရဲကြဘူး။
ကျုပ်ကတော့ “ဪ … ဒကာကြီးကတော့ သူ့သမီးအတွက်ကို ပူရှာတယ်။ သူ့ရင်သွေးကိုး။ တခါ သူ့သမီးကျပြန်တော့လည်း ဝင်ပူးကတည်းက ကျန်ရစ်တဲ့ သူ့ကလေးကိုသာ တ ပြီး မှာရှာတယ်။ အဖေနဲ့ အမေအကြောင်းတော့ တစ်ခွန်းမှ ဟ မသွားဘူး။ မိဘမေတ္တာဆိုတာ စုန်ရေဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့” လို့သာ သံဝေဂ ပွားမိပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းကို ဝတ္တုတိုလေးအဖြစ် ကျနော် ရေးထားတာ ကြာပြီ။ ဘယ်မှ မပို့ဖြစ်သေးဘဲ လက်ရေးမူပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
(နောက် အဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်ရေးဦးမယ်။)
13 responses to “Para Lawka (3) – Possession”
This blog uses Myanmar Unicode fonts (Myanmar3, Parabike etc.,). To install font, pls check this blog’s sidebar.
ဒီပို႔စ္ကို စိတ္၀င္စားလို႔ ဖတ္ခ်င္ေပမဲ႔ ေဖာင္႔မတူလို႔ ဖတ္မရပါဘူး။ ဘေလာ႔ဂ္ဂါေတြအားလုံး Unicode တစ္မ်ိဳးတည္းကို သုံးဖို႔၀ိုင္း၀န္းၾကရင္ေကာင္းမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲ Unicode ကို သုံးခ်င္ေပမဲ႔ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးဘူး။
Everyone has the “right” to choose as they like. 🙂
I use many fonts ZG, Win and all Unicode fonts with various browsers: Firefox, Chrome, IE and Opera.
Unicode ကို သုံးခ်င္ေပမဲ႔ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးဘူး။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပူးႏုိင္တယ္ဆုိပါစုိ႔။ ဒါေပမဲ့ House MD ထဲ ၾကည့္ရတာ ေျပာရဦးမယ္။ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ Berry’s aneurysm လုိ႔ေခၚတဲ့ ေသြးေၾကာထုံးကေလး ရွိတယ္ဗ်ာ။ ဒင္းက (ဦးေႏွာက္ရဲ႔ အသည္းကြဲေနရာ ဆုိပါစုိ႔ဗ်ာ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္) အဲဒီေနရာကုိ ဖိထားေတာ့ အဲဒီလူနာက မင္းသမီးကုိ ျမင္တုိင္း အေၾကာင္းမဲ့ အသည္းကြဲေနတယ္ဗ်။ ေနာက္ဆုံး ႏွလုံးခုန္တာပါ ရပ္သြားလုိ႔ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာရင္းရွာရင္း တုိတုိေျပာရရင္ အဲဒီေသြးေၾကာထုံးကေလးကုိ ခြဲလုိက္မွ ေပ်ာက္သြားတယ္။ (က်ဳပ္ေတာ့ မယုံပါဘူး။) ဒါေပမဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပီး အသည္းကြဲလုိ႔ ႏွလုံးၾကြက္သားေတြ ေသတဲ့ (Broken heart syndrome) လုိ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးလည္း ရွိေသးတယ္။ စိတ္ရယ္၊ ႏွလုံးရယ္၊ ဦးေႏွာက္ရယ္ ဒါေတြကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ေကာင္းေကင္း မသိေသးဘူးဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ကာယကံရွင္ရဲ႔ စိတ္ေနသေဘာထားကို မူတည္ျပီး စစ္မွန္တဲ့ ပူးကပ္ျခင္း ရွိသလုိ pseudo ပူးကပ္ျခင္းေတြ ရွိေကာင္းရွိမွာပဲ ထင္တယ္ဗ်။ ဥပမာအားျဖင့္ crowd psychology လုိမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။ ျပႆနာကုိ ေရာင္မီးထြန္းရွာတယ္ပဲ ဆုိဆုိေပါ့ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာမွမေျပာနဲ႔ ဒီတုိင္း ဖတ္ၾကည့္ဆုိလည္း စိတ္၀င္စားပါတယ္။ (Ahlataya)
အလွတရားရွင္းျပတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ရဲ့ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ အေထာက္အထားမ်ားစာအုပ္မွာ အဲဒီသေဘာကုိ ေဆြးေႏြးထားတာ ဖတ္မိပါတယ္။ စိတ္ဟာ ဦးေႏွာက္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆဘက္က လာတယ္ ထင္ပါတယ္။
အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာပဲ အဂၢါေကစီဆိုတဲ့ အေမရိကန္တစ္ေယာက္အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ အခု အဂၢါေကစီအင္စတီက်ဳ (http://www.edgarcayce.org/) နဲ႔ အတၱလန္တစ္တကၠသိုလ္ဆိုျပီး သုေတသန ျပဳေနၾကပါတယ္။
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္အျပင္ ဦးေအးေမာင္လည္း ဒီပူးကပ္ျခင္းနဲ႔ ပုဏၰတိုက္ျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကို သုေတသနခ်ဥ္းကပ္မႈက တင္ျပတာေတြကို မိတ္ဆက္ေပးထားတာ ဖတ္ရဖူးပါတယ္။
ခုနက ဦးေႏွာက္က အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုနဲ႔ ဆိုင္တယ္ ဆိုရာမွာ မသိဘူးေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း၊ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာေျပာႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အနာဂတ္ကို ျမင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကိုက်ေတာ့ ဘယ္လို ရွင္းျပႏိုင္မလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ဘယ္လုိမွကုိ ဖတ္လုိ႕မရဘူးေနာ္..ညစ္ပါ့… 😦
ပို႔စ္ကို ဖတ္လို႔မရဘူး စိတ္၀င္စားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ေဇာ္ဂ်ီမသံုးတာလဲ။ ကၽြန္မကေတာ့ တျခား Font ေျပာင္းရိုက္ရမယ္ဆိုရင္ လက္က အက်င့္ရေအာင္ မနည္းျပန္လုပ္ရလိမ့္မယ္။ အစက Win-Burmese ပဲ ရုိက္ၿပီး ေဇာ္ဂ်ီကို ေျပာင္းတုန္းကေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီက ပိုလြယ္လို႔ သိပ္မခက္ခဲဘူး။ အခုက ေဇာ္ဂ်ီကို အက်င့္ရေနၿပီ။
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရန္ သက္သက္အတြက္ကေတာ့ ျမန္မာသရီးေဖာင့္ လိုပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္အေၾကာင္း သိလိုပါက ဂူဂယ္မွာ ရိုက္ရွာလွ်င္ ျမန္မာလို အမ်ားအျပား ရွိပါေၾကာင္း။
လတ္တေလာမေျဖေသးေတာ့လည္း ေျဖတဲ့အခါကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္႐ႈရေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာ။ ဖတ္ခြင့္ ၾကံဳရင္ေပါ့ 🙂 အသက္ႀကီးတဲ့အခါၾကေတာ့ အယူ၀ါဒမရိွသူကေန ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့သူျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္သြားႏိုင္တာပဲ။ မဟုတ္ဘူးလား? အျခားဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့သူလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဦးဆန္းလြင္ေရးတဲ့ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းစာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီးသြားၿပီလားလို႔ တစ္ခုေလာက္ ထပ္ေမးခ်င္ပါေသးတယ္…. (ဖတ္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။) (ေစတနာျဖင့္ ၫႊန္းတာပါခင္ဗ်ာ)
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ ကိုသင္ကာတစ္ေယာက္ ဘုရားရဲ႕တရားလမ္းစဥ္ေတြအတိုင္းက်င့္ခဲ့ေပမယ့္ ခရီးမေရာက္ (သို႔မဟုတ္) စိတ္ပ်က္စရာ ေတြ႕ခဲ့လို႔ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပံုပါပဲ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ ကိုသင္ကာလိုလူတစ္ေယာက္က ဗုဒၶအယူ၀ါဒစြန္႔လႊတ္လိုက္တာကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
အၾကိဳက္ဆံုး ဘာသာေရးနဲ႔ အေတြးအေခၚ စာေရးသူမ်ားထဲမွာ ဦးေအးေမာင္နဲ႔ ဦးဆန္းလြင္က ထိပ္ကပါ။ ေရးေရးသမွ် အကုန္ ဖတ္ဖူးပါတယ္။
က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သလိုပဲ၊ အရမ္းကာေရာ ဘာသာလြတ္ျဖစ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ မေကာင္းဘူးလည္း မဆိုပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ အမ်ားသူငါ ေရလိုက္ငါးလိုက္ေတာ့ လက္မခံထားပါဘူး။
ကိုယ့္ယူဆခ်က္ ဘာမွားတယ္ ဘာမွန္တယ္ ေလ့လာဆဲပါပဲ။
ေလ့လာဆဲမွာ ေနာက္ကို ေျခလွမ္းမ်ားစြာ ဆုတ္ထားပါတယ္ (တနည္း) ဘာသာေရး အရိပ္ေအာက္က လြတ္ေအာင္ ေနပါတယ္။